समाचार - के तपाईंलाई एक राम्रो फ्रन्ट एन्ड लोडर्स अपरेटर बन्ने छ सुझावहरू थाहा छ?
एक राम्रो फ्रन्ट एन्ड लोडर अपरेटरले लोडर चलाउँदा मेसिनको प्रयोग कसरी गर्ने, मेसिनको पोशाक घटाउने, ईन्धनको खपत कम गर्ने, र काम द्रुत र राम्रोसँग पूर्ण रूपमा कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा स्पष्टसँग थाहा छ।
निम्न tips सुझावहरूले तपाईंलाई राम्रो लोडर अपरेटर बनाउनेछ! आउनुहोस् एक पटक हेर्नुहोस्।
जब फ्रन्ट एन्ड लोडरहरू काम गरिरहेका हुन्छन्, एड़ी ट्याक्सीको भुँडी नजिक छ, खुट्टा प्लेट र एक्सिलरेटर प्याडल समानान्तर राखिन्छ, र ग्यास प्याडल बिस्तारै थिचिन्छ।
जब फ्रन्ट एन्ड लोडरहरू सञ्चालनमा छन्, थ्रटल सधैं सधैं स्थिर हुनुपर्दछ। सामान्य अपरेटिंग सर्तहरूमा, थ्रॉटल उद्घाटन करीव 70० ~ %०% हुनुपर्दछ।
जब फ्रन्ट एन्ड लोडर्सले काम गरिरहेको छ, फुट प्लेट प्लेट ब्रेक पेडलबाट अलग गर्नुपर्दछ, र ट्याक्सीको भुइँमा ब्रेक पेडलमा नछाडि फ्लैट राख्नुपर्दछ।
लोडरहरू अक्सर असमान निर्माण साइटहरूमा काम गर्दछन्। यदि खुट्टा सँधै ब्रेक पेडलमा हुन्छ भने, शरीरको माथि र तलको आवागमनले चालकलाई चालै नपाई ब्रेक पेडलमा कदम चाल्नेछ।
सामान्य अवस्थामा, ईन्जिनको स्थिति नियन्त्रण गर्न र ग्रोहरू बदल्न आवश्यक छ गलाको गिरावट नियन्त्रण गरेर।
यसले केवल बारम्बार ब्रेकि byले गर्दा ब्रेकि system प्रणालीको अत्यधिक ताप नलगाउँदछ, तर लोडरको द्रुत गति बृद्धि गर्न पनि सुविधा ल्याउँदछ।
जब फ्रन्ट एन्ड लोडरहरू काम गरिरहेका हुन्छन्, विशेष गरी जब बिचौलिंग गर्दा, फावडा चक्रवाट लिफ्टि pull तान्ने र स्थिर थ्रॉटलको सर्तमा नियन्त्रण लिभरहरू घुमाएर सामग्रीले भरिन्छ।
उठाउने र बकेट कन्ट्रोल लीभर्सलाई घुमाउने चक्रीय पुलिंगलाई "लगन" भनिन्छ।
यो प्रक्रिया धेरै महत्त्वपूर्ण छ र ईन्धनको खपतमा ठूलो प्रभाव पार्दछ।
समन्वय लिफ्टि the र बाल्टी नियन्त्रण सिलिन्डर बीच जैविक सहयोग हो। फ्रन्ट एन्ड लोडर्सको सामान्य फावो खन्न प्रक्रिया पहिला बाल्टिनलाई भुइँमा राखिन्छ र ढल्काइ सजिलोसँग ड्राइभ गर्नु हो।
जब बाल्टिन समानान्तर रूपमा सामग्री ढेरमा मिल्छ र प्रतिरोधको सामना गर्दछ, पहिले हात उठाउँदा र त्यसपछि बाल्टिनलाई फिर्ता लिने सिद्धान्तलाई सर्वप्रथम अनुसरण गर्नुपर्छ।
यसले बाल्टिनको तल प्रतिरोधलाई प्रभावकारी रूपमा बच्न सक्छ, ताकि अधिकतम ब्रेकआउट बल पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
,, कडा निषेधित
पहिलोलाई थ्रोटल विस्फोट गर्न कडा निषेध गरिएको छ। जे होस् फ्रन्ट एन्ड लोडरहरू हिंडिरहेका छन् वा फाल्दा लोडि duringको क्रममा, एक्सेलेटर पेडलमा जोडले जोड नलगाउनुहोस्, र सधैं एक्सेलेटर नियन्त्रण प्रकाश र स्थिर राख्नुहोस्। अपरेशनमा मानव निर्मित असफलताहरूलाई पर्याप्त रूपमा कम र कम गर्नुहोस्।
दोस्रो, टायर स्किडिingलाई कडा निषेध गरिएको छ। जब फ्रन्ट एन्ड लोडरहरू सञ्चालनमा छन्, जब टायर स्लिप हुन्छ प्रतिरोधको सामना गर्न र थ्रोटल बढाउँदा। यो घटना सामान्यतया ड्राइभर द्वारा अनुचित अपरेसनको कारणले हुन्छ, जसले इन्धनको खपत बढाउँदछ र टायरलाई क्षति पुर्‍याउँछ।
तेस्रो भनेको पछाडिको झुकावलाई कडा रूपमा निषेध गर्नु हो। लोडरको ठूलो खोल्ने बलको कारण, चालकले प्रायः ठोस मूल माटो र ढु stone्गाको पहाडी र अन्य कार्यहरू गर्दछ। यदि अपरेशन अनुचित छ, दुई पछाडिको पा .्ग्रो जमीन बाहिर उचाल्न प्रवण छ। यस झुकाव कार्यको अवतरण जडत्वले बाल्टिनको ब्लेड भाँचिनेछ र बाल्टिनलाई विकृत पार्छ; जब पछाडो पा .्गो ठूलो झुकाव हुन्छ, यो अगाडि र पछाडि फ्रेम र अन्य संरचनाहरूको वेल्डिंग क्र्याक गर्न को लागी पनि सजिलो छ, वा प्लेट पनि भाँच्दछ।
चौथो भनेको पाइलमा हिर्काउन कडाइका साथ प्रतिबन्ध गर्नु हो। सामान्य सामग्रीहरू चलाउनका लागि, लोडर II गियर (सात स्पीड गियरबक्स, तीन स्पीड गियरबक्स दोस्रो गियर प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ) मा अपरेट गर्न सकिन्छ, र यसलाई II गीयरको माथि गियरमा सामग्री ढेरलाई आन्तरिक रूपमा प्रभाव पार्न कडा निषेध गरिएको छ। सहि तरीका भनेको गियर I को लागी स्विच गर्नु पर्छ समय मा एक shoveling प्रक्रिया पूरा गर्न को लागि जब बाल्टी स्टकपाईलमा पुग्छ।
तपाइँले तपाइँका लागि व्याख्या गरिएका छ वटा सुझावहरू सम्झनुहुन्छ?
ट्रान्जिट मिक्सर, फोर व्हील लोडर, सेल्फ लोडिंग मिक्सर ट्रक, सिमेन्ट मिक्सर कंक्रीट खन्याउने, बेल व्हील लोडरहरू, 2021d व्हील लोडर,